၈.၈.၈၈ နှလုံးသားမဲ့ လက်မရွံ့ လူသတ်ပွဲ | ကျွန်မ၏ခံစားမှုများ သီကုံးရာ လွတ်လပ်ခြင်းအနုပညာ
July 31, 2008, 2:34 am
thanks lin let. you should have to keep for history of 8888.
Comment by ayinepan2000 August 1, 2008 @ 6:27 am
လင်းလက်ရေ……ဘလော့ဆိုတာကို သိရတဲ့အချိန်ကစပြီး လင်းလက်ကြည်စင်ဆိုတာလည်း
တွေတင်ပေးပါ.. proxy တွေကြားကနေပြီးလာရတာပါ
ကျွန်တော်ရဲ့ ဘလော့ကိုလည်းလာပါ အကြံပေးပါ
http://yannaing-thinking.blogspot.com ပါ ။
Comment by yannaing August 2, 2008 @ 3:11 pm
၈ လေးလုံး ရဲ့ မြင်ကွင်းတွေကို မကြည့်ရက် ပေမယ့် သေသေချာချာ ထပ်ကြည့် သွားပါတယ် မလင်းလက်…။ သန်းရွှေကို ပြည်သူ မနိုင်ပေမယ့် Natural Law က နိုင်လာမှာပါ…။ မကောင်းမှုဆိုတာ ဆိတ်ကွယ်ရာ မရှိပါဘူး.. ဒီလို ပေါ်ပေါ်ထင်ထင် ယုတ်မာ ပက်စက်သူတွေ အတွက်ကတော့ ဆွေးစဉ်မျိုးဆက် အပြစ်တွေ ခံစားရမှာပါ…။
Comment by အီဖေကို August 3, 2008 @ 12:17 am
လင်လက်ရေ စာလာဖတ်သွားပါတယ်။ ၈၈ သမိုင်းကို လင်းလက်တို့လို မျိုးဆက်သစ်တွေက အခုလို ပြန်လည်တင်ပြပေးတာကို သိပ်ပြီးကျေးဇူတင်တယ်၊ ဂုဏ်လည်းယူပါတယ်။
Comment by Nge Naing August 4, 2008 @ 7:59 am
မှန်အောင် ပစ်မယ်တဲ့ဗျ.. မှန်အောင်ပစ်တာ.. ကိုယ့်သားသမီး ကိုယ်သတ်နေတယ်ဆိုတာ နေဝင်းမသိဘူးနဲ့ တူတယ်.. လာလည်သွားပါတယ် ညီမ.. အကို အခု ဘလော့စပေါ့မှာ စာပြန်ရေးနေပါတယ်.. .ကွန် ကြီးက ပိုးကိုက်သွားလို့ .. အားရင် လာအားပေးပါဦးဗျာ..
Comment by Min Min September 9, 2008 @ 9:10 pm
၈၈ နဲ.ပတ်သက်လာတိုင်း ဘယ်နှစ်ကြိမ်မှန်းမသိတဲ့
Comment by htike May 27, 2009 @ 2:50 pm